European Commission inokurudzira nyika dzeEU kuti dzivhurezve kune vachengeti vekune dzimwe nyika vachengetedzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » European Commission inokurudzira nyika dzeEU kuti dzivhurezve kune vachengeti vekune dzimwe nyika vachengetedzwa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • Nhau Dzakanaka • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
EC nhasi yambira nyika dzeEuropean Union kuti dzisimise zvirambidzo pamafambiro "asiri akakosha" kune vatorwa vazara zvizere
Vanhu vakabaiwa zvakakwana COVID-19 vanofanirwa kubvumidzwa kupinda muEU
Parizvino European Medicines Agency yakapa mvumo yekukurumidzira Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca naJohnson & Johnson
MaYravelers anongobvumidzwa kupinda muEU kana vachiuya vachibva kune imwe nyika ine 'yakanaka epidemiological mamiriro'
Vanhu vakabaiwa zvakakwana COVID-19 vanofanirwa kubvumidzwa kufamba kuenda uye mukati meEuropean Union, chero bedzi chirwere checoronavirus chakamiswa zvakakwana munyika yavari kubva, European Commission (EC) yataura nhasi.
EC nhasi yambira nyika dzeEuropean Union kuti dzibvise zvirambidzo pamafambisirwo “asiri akakosha” kune vekunze vakagamuchira zviyero zvese zvejekiseni rinotenderwa kushandiswa mukati meEU, mazuva gumi nemana asati asvika. Brussels yakawedzera kuti nyika dzinogona kusarudza kuwedzera gwara rekubatanidza majekiseni ese akasainwa neWorld Health Organisation (WHO) yekushandisa nechimbichimbi. Parizvino European Medicines Agency yakapa mvumo yekukurumidzira yePfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca uye Johnson & Johnson jabs.
Chirongwa ichi chakataura zvakare kuti European Union inoti inosarudza kurega kuongorora coronavirus kana kuisa kwega zvido zvevagari venyika yeEU vanofanirwa kuwedzera mutemo kune vaccinicci vafambi vanobva kunze kwenzvimbo.
Nekudaro, vafambi vanongobvumidzwa chete kupinda muEuropean Union kana vachiuya vachibva kune imwe nyika ine "mamiriro akanaka ekurwara." Hutungamiriri hwebloc hwati sezvo dambudziko rehutano richisimukira pasirese, rinotarisira kukwidza chikumbaridzo chezviitiko zvitsva zvemacoronavirus zvinoshandiswa kuona kuti ndedzipi nyika dzichasvikirwa neruvara rwekuyambuka muganho. Iyo rondedzero ichaongororwa uye kuvandudzwa vhiki mbiri dzese
EC yakataura kuti kudzamara iyo 'green chitupa' yekudzivirira pasipoti yanyatso zadzikiswa, nhengo dzenhengo dzinofanirwa kugamuchira humbowo hwejekiseni kubva kune dzisiri nyika dzeEU, chero magwaro acho anogona kuve echokwadi uye ane data rese rakakodzera. Nhengo dzenyika dzinogona kugadzira mawebhusaiti anotendera vafambi vekunze kukumbira kubvumidzwa kwepasipoti yekudzivirira kubva kune isiri-EU nyika, uyezve kukumbira chitupa chegirini kana chatanga kushandiswa.